Samsung Galaxy Rịba ama 8, echi tinye na idobere site na ndị ọrụ | Akụkọ akụrụngwa
Samsung na-ewetara n’ehihie a (17pm na Spain) ọkọlọtọ ya na-esote. Ọ bụ ihe nlereanya nke ọ chọrọ iji kwenye ndị ọrụ na ha bụ ndị eze nke mpaghara ahụ phablet. Anyị na-ekwu okwu, n'ụzọ ezi uche dị na ya, nke ọhụrụ Samsung Galaxy Note 8.
N'ehihie a, anyị ga-ama nkọwa niile gbasara ihe ọdụ ọhụrụ a na-enye. O sina dị, Taa Gadget amụtala na site na echi (August 24) ndị ọrụ Spanish ga-ekwe ka idobe ọnụ ya. Oge ndoputa ga adi rue Septemba 14. Ma, olee mgbe nkeji mbụ ga-erute ndị ahịa?
Ọ dị mma ugbu a na Septemba 15 nke mbụ ga-abịakwute ndị nwe ha. Anyị enweghị ike ikwenye ma ọ ga-adị na ndị ọrụ niile ma ọ bụ ọ bụrụ na enwere ike ịchọta ya na ụlọ ahịa anụ ahụ niile.
N'otu aka ahụ, site na Actualidad Gadget anyị nwekwara ike ikwenye na n'etiti njirimara ndị anyị nwere ike ịmata bụ nke ihuenyo ihu na ihu - na-enweghị oke. Nha ya ga-abụ 6,3 sentimita asatọ. Ọ ga-enye teknụzụ HDR na akụkụ nke 18,5: 9.
Anyị nwekwara ike ikwenye na ọ ga-abịa na igwefoto igwefoto abụọ. Na nke ahụ ewu ewu S-Pen stylus agbakwunyere na ga-arụ ọrụ na ihuenyo anya (ọ ga-eji dị ka a freehand) na bụ waterproof. Nke ahụ bụ, Samsung Galaxy Note 8 nwere ike ịmị mmiri.
N'otu aka ahụ, site na ike nke Samsung Galaxy Note 8 ọhụrụ a nwere, ụfọdụ n'ọkwá, a ga-agbakwunye ntọala kachasị ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ nke na-eme ka njedebe ahụ ghọọ kọmputa desktọọpụ niile. Anyị na-ekwu maka ya Samsung DEX. Ọ bụ otu n'ime ngwa na mgbe ijikọ ọnụ, a na-arụ ọrụ interface nke na-eme ka njikwa ngwa niile site na ihuenyo mpụga.
N'oge anyị enweghị ike ịgwa gị ọnụahịa ya. Ma Ihe niile na-egosi na ego a ga-akwụ maka ọkwa Samsung ọzọ ga-amalite na 880 euro. Agbanyeghị n'ehihie a, anyị ga-ahapụ obi abụọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Samsung Galaxy Rịba ama 8, echi na-etinye na ndoputa site na ndị ọrụ
HP OMEN X Laptọọpụ, laptọọpụ egwuregwu nwere ike 'overclocking'